Teknolojia · Septambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Teknolojia · Septambra, 2017
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Septambra, 2017
Mampifanohy ny Elanelana Ara-teknolojia Eto Afrika
Afrika Mainty19 Septambra 2017
Nisarika ny saiko vao haingana ny tetikasa miisa roa samihafa natao hampifandraisana ny "elanelana nomerika" eto Afrika. Nieritreritra ny hanasongadina fotsiny ihany ny tetikasa miaraka amin'ny famintinana fohy sy ny rohy mankany amin'ny tranonkalany aho.
Kambodza : Meteza Ho Voalohany Amin'ny Fitantaràna
Azia Atsinanana10 Septambra 2017
Andraso... Tsy ilay oniversite Harvard malaza be ity fa ny sekoly ambarataonga faharoa Hard Word. Tena tsy fantatro ny antony nanaovany ny anarana hoe "Hard Word".
Ry Tontolo, Ndeha Hihaona amin'i Afrika! Fomba Iray Vaovao Hitantarana Ny Tanibe
Afrika Mainty06 Septambra 2017
Mahakivy matetika ny mamaky ireo fitantaràna an'i Afrika any anaty media mahazatra. Amin'ny lafiny roa, raha ny marina. Voalohany indrindra, izay faritana ho mendritra hanaovana tatitra, dia tena mahakivy. Faharoa manaraka izany, satria tsy dia mirona loatra amin'ny tena zava-misy sarotra sy manetsiketsika ao amin'ilay tanibe, amin'ny fidadasiky ny fahasamihafana...
Shily: Fivoriana Amin'ny Fisainana Mpanombo-Draharaha Ihariana
Amerika Latina04 Septambra 2017
Notontosaina tamin'ny fiandohan'ny taona (2007) tao Santiago ny Webprendedor, fihaonan'ny mpanombo-draharaha sy ireo liana te-hahafantatra ny fanaovana izany. Tsy resaka teknika loatra ny fampianarana, fa nifantoka kokoa amin'ny vinam-pihariana, fikarakarana ny mpanjifa, ary ny fomba fanangonana famatsiam-bola. Nanoratra ny zava-natrehiny tamin'izany ny bilaogera.
Ranomasimbe Indiana: Mahatsiaro Mifandray Amin'izao Tontolo Izao Ny Bilaogera Amin'ny Alalan'ny Global Voices
Afrika Mainty03 Septambra 2017
Nahamarika ny lahatsoratra GV vao haingana momba ny tontolon'ny bilaoginin'izy ireo ny bilaogera avy any amin'ny faritra lavitra any amin'ny Ranomasimbe Indianina toa an'i Madagasikara sy La Réunion ary naneho ny hafanam-pony momba ny asan'ny GV sy ny fanasongadinana ny fireneny .